जनगणनाले अमेरिकी थोक बिक्रेताको लागि आशाजनक समाचारहरू प्रदान गर्न जारी राख्यो - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक नोभेम्बर 29, 2020 डिसेम्बर 16, 2020 थोक र B2B समीक्षा अर्जेन्टिना थोक र B2B, एशिया थोक र B2B, बंगलादेश थोक र B2B, बेल्जियम थोक र B2B, ब्लग, बेलायत थोक र B2B, बुल्गारिया थोक र B2B, व्यापार, क्यानाडा थोक र B2B, चीन थोक र B2B, डेनमार्क थोक र B2B, DR कांगो थोक र B2B, सम्पादकको पिक, इजिप्ट थोक - B2B, फ्रान्स थोक - B2B, जर्मनी थोक र B2B, ग्लोबल थोक अनलाइन, ग्लोबल विश्व, ग्रीस थोक र B2B, ह Hongक Kong थोक र B2B, हंगेरी थोक र B2B, भारत थोक र B2B, इन्डोनेशिया थोक र B2B, इटाली पसल थोक र B2B, जापान थोक र B2B, केन्या शप ग्लोबल, मेक्सिको थोक र B2B, नाइजेरिया थोक - B2B, पाकिस्तान थोक र B2B, फिलिपिन्स थोक र B2B, रूस थोक र B2B, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, दक्षिण अफ्रीका थोक - B2B, दक्षिण कोरिया थोक र B2B, स्पेन थोक र B2B, थाईल्याण्ड थोक र B2B, टर्की थोक र B2B, युक्रेन थोक र B2B, थोक - B2B, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
महिनाको अन्त्यमा अक्टोबरको थोक सूची, मौसमी भिन्नताको लागि समायोजित तर मूल्य परिवर्तनको लागि होईन, $$646.2.२ अर्ब डलर अनुमान गरिएको थियो। त्यो सेप्टेम्बरको आंकडासँग 640.4 2.7०. billion अर्बको तुलनामा छ। वर्षको मिति, तथापि, अक्टोबर २०१ 2019 को अन्त्यको तुलनामा यो संख्या २.XNUMX% तल छ।
यो सम्झन लायक छ कि सूचीहरू हुन् कुल घरेलू उत्पादन परिवर्तनको एक प्रमुख घटक। उच्च इन्भेन्ट्रीले प्राय: बिक्रि नभएको सामानहरूको अधिशेषलाई संकेत गर्दछ र आर्थिक मन्दीलाई देखाउन सक्छ। यसको विपरित, कम इन्भेन्ट्रीले सामान्यतया कडा आर्थिक बृद्धिलाई स indicates्केत गर्दछ, र शिल्फमा उडान उडानको साथ उच्च माग देखाउँदछ।
यसले सम्पूर्ण कथा बताउँदैन, तथापि, विशेष गरी यस वर्ष। कोरोनाभाइरस महामारी, र यसलाई घटाउनका लागि प्रयोग गरिएको ग्रेट लकडाउनले हालसालैको यादमा नदेखी विश्वव्यापी व्यापारको वातावरणमा ठूलो धक्का पुर्‍याएको छ। आपूर्ति श्रृंखलाहरू ढिलो भएको छ वा बिच्छेदन गरिएको छ, र आपूर्ति र माग प्राय जसो एक अर्काको साथ रहन संघर्ष गर्दछ।
त्यो हलिडे सीजनमा कुनै सजिलो हुँदैन। भाग्यवस, थोक व्यापारीको रूपमा तपाईसँग मद्दत छ। भेला ग्लोब किन्नुहोस्, तपाईंको सामानको झोलामा सब भन्दा नयाँ खेलौना।
ग्लोब किन्नुहोस् एक स्थापित ग्लोबल समाचार कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको नयाँ ग्लोबल अनलाइन थोक बजार हो। एक साधारण साइन-अप प्रक्रिया र न्यूनतम सेटअप समयको साथ, ग्लोब किन्नुहोस् थोक बिक्रेताको लागि छिटो र सजीलो उठ्नको लागि अनुमति दिन्छ।
At ग्लोब किन्नुहोस्, हामीले महँगो र अनावश्यक बिचौलिए पनि हटाएका छौं, थोक व्यापारीहरूलाई यस अनिश्चित समयमा लागत घटाउन सहयोग गर्दै। ग्लोब किन्नुहोस् विक्रेताहरूलाई हाम्रो वेबसाइटमा समाचार प्रकाशन र लिस्टिंग पोष्ट गर्न अनुमति दिँदछ, कुनै अगाडि, जेब लागतको। बदलामा, द ग्लोब शपले विक्रेताहरूलाई केवल उनीहरूले बेचनेको मात्र १२% चार्ज गर्दछ।
ग्लोब किन्नुहोस् मा सञ्चालन गर्दछ १०० भन्दा बढी प्रमुख भाषाहरू, विक्रेता र खरीददारहरूलाई तपाईं प्रत्येकले बुझ्ने भाषामा जडान गर्न अनुमति दिँदै। ग्लोब किन्नुहोस् पनि प्रस्ताव गर्दछ मुद्राको एक विस्तृत विविधता, सबै संसारमा विक्रेता देखि क्रेताहरु लाई सामान र पूंजी को एक सजिलो प्रवाह को सुनिश्चितता। प्रत्येक अधिक को बाटो मा छन्।
ग्लोब किन्नुहोस् हाम्रो तेस्रो साइटको साथ हो फ्रीलान्स ग्लोबल गिग, र अभिभावक साइट, सांप्रदायिक समाचार। सबै तीन साइटहरूले द्रुत बृद्धि प्रदर्शन गरीरहेका छन् र उनीहरूलाई ग्लोबल प्लेटफार्मको रूपमा स्थापित गर्दछ जुन हाम्रा विक्रेताहरूलाई कुनै वा कम मूल्यमा हुँदैन।
सांप्रदायिक समाचारले उत्पादन र सेवाहरू, बजार र उद्योगहरूको विविधतामा अप-टु-डेट रिपोर्टहरू र पूर्वानुमान प्रदान गर्दछ। हामी पाठकहरूलाई दैनिक समाचार, व्यापार, खेल, र विश्लेषण प्रदान गर्दछौं। जो कोहीले हाम्रो लक्षित लेखहरू साम्प्रदायिक समाचारहरूमा पढ्न सक्छन्, गुगल समाचार, वा फेसबुक समाचार। हाम्रो साइट को बारे मा अधिक जानकारी को लागी, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
ग्लोब शपिंग गर्न दिनुहोस् यो अभूतपूर्व र अप्रत्याशित छुट्टी सीजनको माध्यमबाट यसलाई बनाउन। आज यसलाई प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्! ग्लोबको ग्लोबल थोक विक्रेता दर्ता खरीद गर्नुहोस् नि: शुल्क छ।
सांप्रदायिक समाचार FGG फ्रीलान्स ग्लोबल गिग ग्लोबल थोक थोक बिक्री ग्लोब किन्नुहोस् थोक अनलाइन
डी Bouse to Fauci: तपाईंको विचार त विज्ञ जस्तो छैन